Mampiteny ny noana sy ny moana… | NewsMada
Tsy fahalalam-pomba, hono, ny miteny, raha mbola eo am-pihinanana. Tsy vitan’izany, kofona izay miteny na be resaka eo am-pihinanana. Izany no mampangina ny mpitondra? Tsy lazaina izay atao; izay lazaina, tsy atao.
Samy olon-ko azy izao na ny mpitondra na ny vahoaka, tsy manan-javatra iombonana sy mampiombona. Tsy inona fa ny tanindrazana, ohatra. Nefa izany aza efa ifandroritana lava noho ny ady tany lava, fivarotana tsy mazava.
Amin’izany, mandoka sy manamarin-tena hatrany ny mpitondra fa mandeha ny fanarenam-pirenena sy ny fampandrosoana. Mba azo porofoina ve fa mihatsara ny fiainan’ny vahoaka ifotony? Mampiteny ny noana…
Fa tsy misy tsy mikaikaika izao ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana isan’andro vaky. Manampy trotraka ny tsy fanjarian-tsakafo, ny tsy fisian’ny asa vaovao miforona; ny efa eo aza, misy afoy na votsotra tsy fidiny.
Mampiteny ny noana ny mpitondra amin’izany? Manosika azy ho very fanantenana, tsy hatoky intsony, handeha amin’ny tsy fankatoavana… Eny, na tenenin-dava aza ny hoe fanomezan-tanana amin’ny fampandrosoana.
Na eo aza ny fahasahiranam-bahoaka lalina, minia manentsin-tadiny ny mpitondra? Tsy vitan’ny mampiteny ny noana, fa mampiteny ny moana. Efa samy nampiaka-peo ny mpanao politika, ny firaisamonina sivily, ny fiangonana…
Vita ny antsasaky ny fe-potoam-piasana, mampiaka-peo ireo nangina hatramin’izay: namela ny mpitondra hiasa. Tapitra ny famindrampo? Tsy azo leferina intsony ny tsy fahombiazana, tsy azo ekena hitohizan’ny fahavoazana…
Inona na iza no mbola andrasan’ny mpitondra vao hihetsika? Na handini-tena, mahalala sy hiaiky fahadisoana, hanova famindra sy fiasa, tsy hitompo teny fantatra, tsy hikaton-trano… Efa mampiteny ny noana sy ny moana ny raharaha.
Inona no hitranga rehefa tsy henoina izay miteny? Na minia manao bemarenina izay itenenana… Ahina hiafara amin’ny baiko moana ny raharaha. Tsy inona fa ny hetsika sisa no hahazoana mifampiresaka… Ho hita eo?